Jowhar.com : Somali Leader News - News: Booqashada Siilaanyo ee Laasqoray oo xiisad ka dhex dhalisay maamulada Somaliland iyo Puntland
April 18 2014 17:03:13
Booqashada Siilaanyo ee Laasqoray oo xiisad ka dhex dhalisay maamulada Somaliland iyo Puntland
Madaxweynaha Somaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa booqasho ku tegey degmada Laasqoray oo ah deegaan ay maamulada Somaliland iyo Punlandba sheegtaan inuu ka mid yahay. Booqashada madaxweynaha Somaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa booqashadiisa lagu macneeyay inay ahayd sidii uu u booqan lahaa shacabka ku nool degmada Laasqoray oo aan madaxweyne ka socda Somaliland uu booqday. Maamulka Puntland ayaa waxa ay cambaareeyeen booqashada uu ku tegey Siilaanyo Laas-Qoray iyagoo ku tilmaamay daandaansi, waxana uu maamulka Puntland uu ka digay isku dhac dhex mara labada maamul.
Wasiirka warfaafinta, Boostada, isgaarsiinta iyo hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle oo shir jaraa�id ku qabtay xaruunta wasaarada, wuxuu sheegay in Puntland socdaalkaas u aragto daan-daansi.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Puntland ka digayso isku dhac maamul oo dhex mara deriskooda, wasiirka oo ay weriyaashu su�aalo weydiiyeen ayaa sheegay in Laasqoray aysan ahayn furin dagaal. Waxana uu wasiirku sheegay in ciidamada Puntland ay gaareen degmada Laas-Qoray kadib markii ay ka tageen wafdigii uu horkacayay madaxweynaha Somaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Degmada Laas-qoray ayaa waxaa ay ka tirsan tahay gobolka Sanaag iyadoo degmadaasina ay caan ku tahay soo saarka kalluunka. Degmada Laas-qoray ayaa waxaa ku taal meel ku dhow degmada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Somali news leader
Jowhar.com652,898 unique visits